30 Minamato Yekunamatira Yekuporesa uye Kununura | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 30 Minamato yeMinamato Yekuporesa uye Kununura
Hakuna mwana waMwari muZion anotenderwa kurwara. Hutano hwamwari uye kupora inhaka yedu. Kurwara nezvirwere zvinobva kuna dhiabhori uye Jesu akauya kuzoparadza mabasa aDhiabhori .. Mabasa 10:38. Ini ndarongedza makumi matatu emunamato mapoinzi kurapa uye kusunungurwa kukugonesa kutora kurapwa kwako kwaunoda, nokutenda uye nesimba. Iyi minamato yemunamato ichakutungamira iwe kurwa pamweya kwemweya kurwisa marudzi ese ezvirwere nezvirwere, kusanganisira hosha dzinoshamisa uye urwere hwekuzvarwa nahwo.
Namata uyu minamato nemoyo wako wese, unamate uine tarisiro huru uchiziva kuti isu tinoshumira Mwari vanoporesa. Jesu ndiye bharari muGireadhi. Ndiye bharamu yedu yekuporesa, saka batai Iye muminamato uye muwane kubudirira. Iyi minamato yemunamato ichawedzera simba pakutenda kwako paunotsiura chirwere nezvirwere mumuviri wako. Chirwere chega chega chine zita uye iro zita rinotarisirwa kuzita raJesu Kristu. Naizvozvo iwe sezvaunotuka zvese zvinorwara muhupenyu hwako muzita raJesu, ndiri kuona Mwari vachikuunura zvizere muzita raJesu.
1. Baba, ndinotenda Mwari nekuita gadziriro yekununurwa kwangu kubva chero kurwara muzita raJesu.
2. Ndinozvisunungura kubva kuchirwere chipi zvacho chakagarwa nhaka, muzita raJesu.
3.Ishe, Tumira demo remoto kunheyo yehupenyu hwangu uye uparadze miti yese yakaipa yezvirwere mumuviri wangu muzita raJesu.
4. Ropa raJesu ngaribude muhurongwa hwangu zvese zvakaburitswa satanic zvokurwara muzita raJesu.
5. Ndinozvisunungura kubva mukubatwa kwechirwere chero chipi zvacho chakafambiswa muhupenyu hwangu kubva mudumbu, muzita raJesu.
6. Rega ropa raJesu nemoto weMweya Mutsvene zvichenese chero nhengo mumuviri wangu, muzita raJesu.
7. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva patsika dzakaipa dzese dzezvirwere, muzita raJesu.
8. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva kunhaka yega yeipi yakagarwa nhaka inotungamira kurwara kazhinji mumuviri wangu, nezita raJesu.
9. Ini ndinopesana nemweya wega wega wekurwara muhupenyu hwangu muzita raJesu.
10. O Ishe, simba renyu rorumuko ngaribve pahutano hwangu muzita raJesu.
11. Ini ndinosunga mweya wega werufu unoshanda mumuviri wangu muzita rakasimba raJesu.
12. Ndinoraira mapfupa ese akafa mumuviri wangu kuti auye mupenyu, muzita raJesu.
13. Iwe wakaisa ruoko rwakaipa pamusoro wangu kuti ugamuchire kutinhira uye moto waMwari uye ugochwa, muzita raJesu.
14. Ini ndinoraira giraidhi yega yega yakaipa yakagadzirirwa kupokana nehutano hwangu kuti iparadzwe, muzita raJesu.
15. Ini ndinofema muhupenyu hwaMwari uye ndinoramba mweya yega yega yekufa uye guva muzita raJesu.
16. Ini ndinopora zvese zviwanikwa zvandakarasika kuburikidza nekurwara muzita raJesu.
17. Baba, ita kuti Simba rako rekusika rishande zvakare mumuviri wangu muzita raJesu.
18. Baba, rega moto weMweya Mutsvene upinde muropa rangu uye uchenese hurongwa hwangu, muzita raJesu.
19. Ini ndinosunungura masystem emuviri yangu kubva kukamba yeuipi hwekumba, muzita raJesu.
20. Ruzivo rwese nezve muviri wangu ngarudzwe kubva mundangariro dzasatan dzese, muzita raJesu.
21. Ini ndinoraira zvimiti zvese zvakashata muhupenyu hwangu, buda nemidzi yako yese, muzita raJesu!
22. Imi vakaipa vasingazive chirwere uye chirwere mumuviri wangu, ndinokurayira kuti ubude izvozvi !!! muzita raJesu.
23. Ini ndinobuda uye ndageza chero chikafu chinodyiwa kubva patafura yedhiyabhorosi ichikonzera kurwara kusingaperi mumuviri wangu, muzita raJesu.
24. Rega zvinhu zvese zvisina kunaka zviri kutenderera muropa rangu zviburitswe, muzita raJesu.
25. Ndinozvifukidza neropa raJesu uye neropa iri, ndakadzivirirwa kubva kurudzi rwese rwekurwara muzita raJesu.
26.Mweya Mutsvene moto, kupisa kubva kumusoro kwemusoro wangu kusvika kutsoka dzangu, ndinunure kubva kune ese marudzi ezvirwere muzita raJesu.
27. Ini ndinozvibvisa pane zvese zvinoshamisa hurwere muzita raJesu.
28. Ini ndinozvibvisa pachangu kubva kurudzi rwese rwezvirwere, muzita raJesu.
29. Ndakazvicheka kubva pazvirwere zvese zvinodzoka, muzita raJesu.
30. Baba ndinokutendai nekundinunura zvachose kubva kuzvirwere nezvirwere muzita raJesu.
Previous nyaya20 minamato yenamato kutuka kutuka kwemadzitateguru
inotevera50 mfm minamato inonongedza kutarisana nekuipa kweimba
chinedu Umeanuka Chivabvu 9, 2020 Na2: 28 am
Kuonga Changamire nekuda kweakanakisa emunamato minamato. Kuzodza kwakawanda muhushumiro hwako. Ramba wakasimudzwa.
Roland James Chivabvu 29, 2020 Na7: 19 am
Ndatenda changamire nemunamato uyu une simba
Aroger Otchere Kurume 19, 2021 Pa 9: 44 am
Maita basa mufundisi nemunamato uyu Ndinotenda ndakaporeswa muzita raJesu. Ameni
John Chikumi 25, 2021 Panguva ya6: 34 pm
Ida Minyengetero. Akandibatsira chaizvo muhupenyu hwangu hwekunamata.
Namata Uko Rudzi ReGambia
Kunamata Points Kuti Uzive Uye Uzvipire Kuda kwaMwari